Orinasa firavaka sy firavaka - mpanamboatra sy mpamatsy firavaka any Shina
Fanomezam-pahasoavan'ny Pretty Shiny dia nirotsaka tamin'ny zavatra vita amin'ny vy nanomboka tamin'ny taona 1984. Ny firavaka sy ny firamantranay dia voalamina toy ny peratra, kavina, rojo, fehin-tànana, kavina, firavaka, firavaka divay, firavaka finday, brooch. Azonao atao ny mizaha ireo fanangonana mahafinaritra anay hahitanao ireo aingam-panahy avy eo anaovanao endrika olona ny endriny. Ny sombintsombiny tsirairay dia nopetahany takelaka tsara ary noholorana tsara miaraka amin'ny kalitao azo antoka. Alefaso ny hafatrao araka ny tianao holazaina, dia hamorona bobongolo izahay hametrahana azy ireo amin'ny firma, matokia anay fa ny zavatra kely dia hahatonga antsika hanana endrika mamirapiratra. Smampiavaka: ● Attachment: kofehy amin'ny fitaovana, peratra, rojo, rojo samy hafa. ● Volavola: 2D na 3D na kiobika feno, fitaovana, endrika, habe, loko namboarina ● MOQ: 100 pcs ● Fonosana: polybag, kitapo volory, boaty fanomezana, boaty hoditra.
Kitapom-bolam-by vy fanontana UV
Mpihazona kavina / mpihazona peratra